पृथ्वीको बनोट :
- पृथ्वी पूर्ण गोलाकार नभै धुव्रिय क्षेत्रमा केही थेप्चिएको र भूमध्येरेखीय क्षेत्रमा केही फूकेको हुनाले ध्रुवीय व्यास १२,७१४ कि.मी. र भूमध्येरेखीय व्यास १२,७५६ कि.मी. रही औषत व्यास १२,८०० कि.मी. रहेको छ । यसको परिधि झण्डै ४०,००० कि.मी. छ ।
- पृथ्वीको कूल क्षेत्रफल ५१ करोड वर्ग कि.मी. मध्ये २९ प्रतिशत जमीन र ७१ प्रतिशत पानीको भाग रहेको छ ।
- पृथ्वी सूर्यको वरिपरी परिक्रमा गर्ने एउटा ग्रह हो । पृथ्वीको उत्पत्ति सौर्यमण्डल संगै भएको हो । यो पूर्णरूपमा भकुण्डो जस्तै गोलो छैन । यसको ध्रुवीय खण्ड थेप्चिएको र भूमध्यरेखीय खण्ड अलि फुकेको छ । पृथ्वी बुध तथा शुक्र भन्दा ठूलो एवम् मंगल, बृहस्पती, शनि, अरूण र बरूण भन्दा सानो छ । पृथ्वीको व्यास १२,७६० ब.कि.मी.छ । बुध र शुक्र ग्रह पछि सूर्यको नजिक पर्ने ग्रह पृथ्वी हो । सूर्य र पृथ्वी बिचको दूरी लगभग १४ करोड ८८ लाख कि.मी.छ । पृथ्वीले ३६५ दिनमा एकपटक सूर्यको वरिपरी परिक्रमा गर्दछ । पृथ्वी अन्य ग्ह भन्दा भिन्न छ । किनभने पृथ्वीमा वायूमण्डल छ जुन अन्य ग्रहहरूमा छैन । पृथ्वीमा अधिकतम् तापक्रम ५९ डिग्री सेल्सीयस रहेको छ । त्यसकारण यस ग्रहमा जीवन रहेको छ । पृथ्वीको एउटा उपग्रह रहेको छ जसलाई चन्द्रमा भनिन्छ । यो पृथ्वीवाट केवल ४ लाख कि.मी.टाढा रहेको छ । चन्द्रमाले पृथ्वीलाई २९ दिन १२ घण्टामा एकपटक परिक्रमा गर्न सक्छ ।
पृथ्वीको उत्पत्ति :
- पृथ्वी सौर्यमण्डलको आठ ग्रह मध्ये एक हो । सौर्यमण्डल र पृथ्वीको उत्पत्ति बारे बैज्ञानिकहरू अहिले सम्म पनि एकमत भएका छैनन् किनभने यस सम्वन्धमा आजसम्म पनि सर्वमान्य प्रमाण उपलब्ध भएको छैन तर विद्व्वानहरूले विभिन्न किसिमका विचार व्यक्त गरेका छन् जसका धार्मिक र बैज्ञानिक दृष्टिकोणहरू छन् । धार्मिक दृष्टिकोण पूर्णरूपले मान्य नभएतापनि बैज्ञानिक दृष्टिकोण केही मात्रामा सत्यको नजीक देखिन्छ । संसारका सवै धर्मशास्त्रहरूमा पृथ्वीको उत्पत्ति बारे केही न केही रूपमा उल्लेख भएको पाईन्छ । हिन्दु धर्मशास्त्रमा पृथ्वीको उत्पत्ति ब्रम्हाले गरेको भनि उल्लेख गरिएको छ । फोनेसियाका निवासीहरू पृथ्वीको उत्पत्ति सूर्यले तयार पारेको गोलोवस्तुवाट भएको मान्दछन् । मिश्रका प्राचिन वासीन्दाहरू “शु“ नामको देवताले समुन्द्रवाट निस्केको फूललाई दुई भाग गरी स्वर्ग र पृथ्वीको सृष्टि गरेको मान्दछन् ।
- विभिन्न धर्मशास्त्रहरूमा पृथ्वीको उत्पत्तिवारे केही धारणा पाइएतापनि ति धर्मशास्त्रहरूमा पृथ्वीको उत्पत्ति कसरी र किन भएको हो भन्ने प्रश्नहरूलाई कुनै ध्यान दिएको पाईदैन । त्यसकारण धर्मशास्त्रका विचारहरू तर्क विनाको कल्पना मात्र हुन् । यसैले बैज्ञानिकहरू यी धारणाहरू सित सहमत छैनन् । आजभोली पृथ्वीको उत्पत्तिवारे बैज्ञानिकहरूकाविच विभिन्न धारणा रहेको छ । ति मध्ये केही सिद्धान्त निम्नलिखित छन् ।
- वायवीय राशि सिद्धान्त (The gaseous theory Kant): जर्मन दार्शनिक इमानुयल कान्टले (Immanual Kant) ले सन् १७७५ मा वायवीय सिद्धान्त प्रस्तुत गरे । उनको विचारमा ब्रम्हाण्डमा पहिले देखी आदिकालिन पदार्थहरू थिए । ती पदार्थहरू आपसमा ठक्कर खाँदा त्यसमा ताप र गति पैदा भयो । घुमाईको कारणवाट एक निहारिकाको जन्म भयो । निहारिका (Nebula) को भ्रमण बेग बढ्दै गयो । अपकेन्द्रीय बल बढदै जाँदा निहारिका को मध्ये भागमा बनेका चक्का अलग अलग हुन थाले । उछुट्टिएर निस्केका चक्कावाट ग्रहको जन्म भयो । निहारिकाको बाँकी रहेको भाग सूर्यकारूपमा रह्यो । ग्रहहरूवाट निस्केका चक्कावाट उपग्रहहरू बने । सुरूमा यो सिद्धान्तले निकै ख्याती पायो ।
- ज्वारीय सिद्धान्त (The tidal theory): यो सन् १९१९ मा जिन्स (Jeans) र सन् १९२६ मा जेफ्री (Jeffreyes) ले पृथ्वीको उत्पत्तिसम्वन्धी प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो । उनीहरूको भनाई थियो – अनादिकालमा एक ग्यासमय सूर्य नजिक एउटा अर्को ठूलो तारा आईपुग्यो । उक्त ताराको आर्कषण शक्तिले गर्दा सूर्यको सतहमा एउटा ज्वार उठ्यो । जति जति तारा नजिक हुँदै गयो ज्वारको आकृति बढ्दै गयो । अन्तमा सूर्यवाट हजारौं किलोमिटर लामो ज्वार छुट्टिएर सिंगार वा चुरोटको रूप लियो । ज्वार सूर्यवाट छुट्टिदासम्ममा तारा सूर्यवाट निकै टाढा पुगिसकेको थियो । सूर्यवाट निस्केको ज्वार न त तारा संग मिल्न पुग्यो न त सूर्यमा नै मिल्न सक्यो । अन्तमा सूर्यको वरिपरी घुम्न थाल्यो। पछि यहि ज्वार धेरै भागमा बाँडियो । त्यही टुक्राहरु अन्त्यमा ग्रह बने । यस सिद्धान्तले २० औं शताद्विको उत्तराद्र्धसम्म अन्य सिद्धान्तभन्दा बढी मान्यता पायो ।
- अटो स्मिडको इन्टर स्टेलर धुलीय सिद्धान्त (Otto Schmidst’s Inter Stedlor dust hypothesis): आटोस्मिड (Otto Schmidst’s) एक रूसी बैज्ञानिक थिए । यिनले सन् १९४३ मा ग्रहहरूको उत्पत्तिसम्वन्धी प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई इन्टर स्टेलर धुलीय सिद्धान्त भनिन्छ । ब्रम्हाण्डमा भएका ग्यास र धुलाको कणवाट ग्रहहरूको उत्पत्ति भएको हो भन्ने यिनको विचार थियो । कुनै बेला ब्रम्हाण्डमा प्रशस्त मात्रामा ग्यासीय पदार्थ र धुलकण थिए, जुन अव्यवस्थितरूपमा फैलिएर घुमिरहेका हुन्थे । सूर्यद्वारा आकर्षित भए पछि ति कणहरू सूर्यको चारैतिर घुम्न थाले । घुम्दाघुम्दै धुलकण सङ्गठित भई घना हुन&nbsp;गए र चक्का (Disc) को रूप लिए । यिनै चक्कावाट ग्रह र उपग्रहहरूको उत्पत्ति भयो । पृथ्वीको उत्पत्तिसम्वन्धी सवै सिद्धान्तले पृथ्वीको उत्पत्तिवारे पूर्णरूपमा स्पष्ट पार्न सकेको देखिदैन । पृथ्वीको उत्पत्ति आज पनि रहस्यकैरूपमा रहेको छ तर विभिन्न सिद्धान्तहरूमा उल्लिखित विचारवाट सौर्यमण्डलको उत्पत्तिसम्वन्धी समस्या समाधानकालागि सजिलो बनाएको छ । विज्ञानको तिव्र विकासले गर्दा हामी निकट भविश्यका पर्याप्त प्रमाण जुटाई पृथ्वीको उत्पत्तिसम्वन्धी रहस्य पत्ता लाग्न सक्छ भनि आशा गर्न सक्छौ ।
5301 Views | Kantipur Job